Mikel Arteta Oo Sheegay Inuusan Mardambe Baraha Bulshada Uusan Soo Dhigin Doonin Wax Ku Saabsan Isaga Iyo Kooxdiisa Kadib Cunsuriyad Lagula Kacay.
Home Horyaalka Ingiriiska Mikel Arteta oo sheegay inuusan mardambe baraha bulshada uusan soo dhigin doonin...
Tababaraha reer Spain ayaa sheegay inuusan mar dambe u adeegsan doonin akoonkiisa Twitter ka dib markii uu u sheegay dhacdooyinka kooxda.
Arteta ayaa yidhi: Waxaan u malaynayaa hadaan akhrinayno wax kasta oo laga qoro annaga, malaha waa inaan sariirta jiifnaa maalmo badan Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen ku soo bandhignay warshadan taas waana sababta aan u door bidaayo inaanan aqrin maxaa yeelay waxay aniga saameyn igu yeelan doontaa shaqsi ahaan waqti aad u badan oo qof doonayo inuu taabto qoyskeyga. Sababta oo ah waxay dhacday, naadiga ayaa ka warqabay waxaanan isku daynay inaan wax ka qabanno. Waana taas. Waa inaan la noolaano. Ma ahan in la joojiyo berrito, waan ognahay taas, laakiin dhexdhexaad, muddo-dheer ayaan wax ka qaban karnaa? Taasi waa waxa aan riixayo.\_”
Mas’uuliyiinta kubbadda cagta ee Ingiriiska waxay warqad furan u direen shirkadaha warbaahinta bulshada iyagoo ugu yeeraya inay wax badan ka qabtaan sidii loo joojin lahaa xadgudubka ka dib dhacdooyinka dhowaan dhacay.
Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Anthony Martial iyo ciyaaryahanka haweenka United Lauren James ayaa ka mid ah kuwa bartilmaamed u ahaa xadgudubka cunsuriyada ee warbaahinta bulshada, oo ay wehliyaan kooxda West Brom ee Romaine Sawyers iyo daafaca Chelsea Reece James – Lauren walaalkiis.
Tababaraha Newcastle Steve Bruce ayaa sheegay khamiista in la ogeysiiyay dadka isticmaala warbaahinta bulshada ee rajeynaya inuu dhinto, halka garsooraha Mike Dean uu codsaday inuusan ciyaarin kulan Premier League ah isbuucaan ka dib markii isaga iyo qoyskiisa ay heleen hanjabaado dil ah.
Arteta ayaa yidhi: Kaliya ma ihi kan silicaya waxyaabaha noocaas ah Waxaan u maleynayaa markii aad guuleysato wax walba inay qurux badan yihiin oo aad tahay qof cajiib ah oo aad tahay tababaraha ugu fiican marka aad lumisona waa iska soo horjeedda dhameystiran. Taasi waa xaqiiqda mana ahan wax lagu farxo. Markay shaqsiyan aniga iga soo horjeedo waan qaadan karaa laakiin markii qoysku ku lug leeyahay markaa waa sheeko ka duwan.
Previous articleKadib dhaawicii Neymar waa kuma xidiga kale ee ugu halista badan PSG.
Next articleIlkay Gundogan oo ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican Premier League bishii Janaayo.